Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Badbaadada Safarka & Xaaladaha Degdega ah » Waaxda Arrimaha Dibedda ee Mareykanka: Ha u safrin Kanada
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Kanada • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • News • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka • Wararka kala duwan
La -taliyihii ugu dambeeyay ee socdaalka oo ay soo saartay Waaxda Arrimaha Dibedda ee Mareykanka, ayaa kor loogu qaaday Kanada oo la gaarsiiyay Heerka 3, kaas oo oranaya 'Dib -u -fiirso safarka'.
Muwaadiniinta Mareykanka ayaa uga digay inaysan u safrin Canada.
Waaxda Arrimaha Dibedda Mareykanka waxay sare u qaadday heerka la -talinta safarka Kanada illaa 3.
Socdaalka u dhexeeya Mareykanka iyo Kanada laguma talin sababtoo ah masiibada COVID-19 ee socota
Wasaaradda Arrimaha Dibedda ee Mareykanka ayaa kordhisay heerka feejignaanta safarka ee dadka Mareykanka ah ee u safraya Kanada, iyagoo kula talinaya dhammaan muwaadiniinta Mareykanka inay dib uga fiirsadaan tagista waddanka inta uu socdo cudurka faafa ee COVID-19.
The Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka waxay soo saartay bayaan ay ku sheegtay inay dib-u-kala-saartay la-taliyeyaasha safarka laga bilaabo Heerka 2-“jimicsigu wuxuu kordhiyay taxaddarka”-illaa Heerka 3-“dib u eeg safarka”-talada CDC, sababtuna tahay“ heer sare oo COVID-19 ah oo Kanada ah. ”
Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka, oo ay weheliso Xarumaha Maraykanka ee Xakamaynta iyo Kahortagga Cudurrada (CDC), ayaa sidoo kale ka digtay safarka Switzerland, oo ka mid ah waddamada kale sababta oo ah tirada sii kordheysa ee kiisaska cusub ee cudurka COVID-19.
Toddobadii maalmood ee la soo dhaafay, in ka badan 21,000 oo kiis oo COVID-19 ah ayaa laga soo sheegey Kanada. Isla mar ahaantaana, in ka badan 900,000 oo kiis oo COVID-19 ah ayaa laga diiwaangeliyay usbuucii hore gudaha Mareykanka, sida laga soo xigtay Xarumaha Xakamaynta iyo Kahortagga Cudurrada (CDC).
Tim Anderson wuxuu leeyahay,
Ogosto 31, 2021 markay tahay 14:19
Hmmm Iyada oo la adeegsanayo apx 10% dadweynaha Mareykanka, wax badan ama ka yar ayaan ku shaqeynaa xeerka 10% fikrado badan.
Haddii Kanada ay leedahay 21,000 kiis oo cusub oo Covid ah, Mareykanka waa inuu lahaadaa kaliya apx 210,000 laakiin waxaa jira 900,000.
Waxay u egtahay in dadka Kanada aysan u safrin Mareykanka>